Burma ( The Power of People): Newsweek ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး။ Burma ( The Power of People): Newsweek ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး။
Newsweek ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး။
ကမ္ဘာကျော် Newsweek ဂျာနယ်ကြီးရဲ့၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အထဲမှာ ပါတဲ့ “The Journalists Who Died Doing Their Jobs in 2014” အထူးကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက သတင်းထောက်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြရတဲ့ သတင်းထောက်များထဲမှာ မြန်မာပြည်မှ ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီးရဲ့အကြောင်း ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
(Than Dar, the wife of slain Burmese journalist Aung Kyaw Naing, also known as Par Gyi, stands in front ofafamily photograph showing herself, her husband and daughter posing with Aung San Suu Kyi, during an interview at her home in Yangon, October 28, 2014. Naing was detained and killed by Burmese military while covering armed clashes between the Burmese army and Karen ethnic rebels. Soe Zeya Tun/Reuters)